Kachasị mma biodegradable uwe na-emepụta na ụlọ ọrụ | Huanna
Iji nọgide na-adị mma ma na-edozi ahụ, gloves nwere ike iwepu anyị bụ nhọrọ kachasị mma. Emere site na ihe eji eme ihe na osisi (PLA), ha bu 100% compostable and biodegradable. Iji maa atụ, ha ga-agbada kpamkpam ụbọchị 180 n'ụdị ebe a na-emepụta compost. Ọ bụrụ na gburugburu ebe obibi, ihe a na-ewe ihe dịka afọ 3 ruo 5 iji belata kpamkpam.
Arọ: 100-140G Ọkpụrụkpụ: 2.1 micron
Ojiji: Nhicha, Ihicha, Washingsa, Kewapụrụ na Mmanụ na Djá Elu ihe: PLA
Ihe: PLA, PBAT, 100% Pụrụ ire ere PLA Ebe Mmalite: Shanghai, China
Brand aha: NATUREPOLY Nọmba nlereanya: HNM-GLO01
Product aha: Ebube a na-ere ere na-ere ere Nha: Otu Nha
Agba: Kọwaa Akwụkwọ: Akwụkwọ nri nri, akwụkwọ biodegradablility
Njirimara ： Biodegradablitiy, nkwado,
Ezigbo na Mgbanwe elu MOQ: 2000boxes
Akara: Customizable Mbukota: 100pcs kwa igbe
Iji nọgide na-adị mma ma na-edozi ahụ, gloves nwere ike iwepu anyị bụ nhọrọ kachasị mma. Emere site na ihe eji eme ihe na osisi (PLA), ha bu 100% compostable and biodegradable. Iji maa atụ, ha ga - emebi ụbọchị 180 niile na gburugburu ebe a na - emepụta kọmpụta. Ọ bụrụ na gburugburu ebe obibi, ihe a na-ewe ihe dịka afọ 3 ruo 5 iji belata kpamkpam. Yabụ, mmepụta anyị bụ nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichedo gburugburu ebe obibi. Mmepụta ndị a zuru oke maka ụlọ oriri na ọ usageụ andụ na ojiji ụlọ, ma ọ bụ ebe ọhaneze ọ bụla ebe ịdị ọcha dị mkpa. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji gloves nwere ike iwepu ma nọrọkwa na-acha akwụkwọ ndụ, jiri PLA Gloves. Ogwe aka PLA bụ ihe ngwọta zuru oke maka idebe aka gị ọcha na ịchekwa gburugburu gị. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere ike inye customizable ngwaahịa dị ka size, agba na na. N'ezie, anyị nwekwara ike ịnye ụzọ nkwakọ ngwaahịa dị iche maka echiche gị pụrụ iche.
Ka imepụta mmezi uru maka ndị ahịa bụ anyị enterprise nkà ihe ọmụma, na anyị ji ezi obi na-atụ anya na-ekwenyere ndị ahịa n'ụwa nile. Anyị kwenyere na anyị nwere ike igboju mkpa dị iche iche nke ndị ahịa ebe anyị nwere ike ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ na-aga n'ihu n'ọkwa dị elu. Anyị ji obi ụtọ nabata ndị ahịa ileta ụlọ ọrụ anyị ma zụta ngwaahịa anyị. Jide n'aka na ị nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka azụmaahịa ma anyị kwenyere na anyị ga-eso ndị ahịa anyị niile kerịta ahụmịhe kacha mma.
Nke gara aga: Akpa ahihia
Osote: Ihe nkiri Mmepụta
Ebube a na-ere ere na-ere ere
Ebube na-ere ere
Compostable biodegradable uwe
Ngwongwo nwere ike iwepu
Disposable uwe Biodegradable